नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, १६ मङ्सिर २०७५)
बजार सारांश (मङ्सिर १३, २०७५)
गत गत साता नेप्से परिसूचक ३२ दशमलव ५४ अङ्क (२.७५ प्रतिशत) घटेर ११४८ दशमलव ७० मा बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से परिसूचक ५० दिनको मुभिङ एभरेज र २०० दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल चलिरहेको छ । पछिल्लो हप्ता दैनिक औसत कारोबार रकम रू. २४ दशमलव ८६ करोड रहेकोमा गत साता कारोबार रकम बढेर रू. ३० दशमलव ३७ करोड पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक गत हप्ता डिसेण्डिङ वेजको टेवालाई ब्रेक गरेर वेजभन्दा तल चलिरहेको छ । नेप्से बिहीवार बियरिश क्लोजिङ मारुबोजु मैनबत्ती प्रवृत्ति बनाएर बन्द भएको छ । अहिलेको समयमा नेप्से ११५० को टेवामा छ, जुन पछिल्ला साताहरूमा बनेको हेड एण्ड सोल्डर प्रवृत्तिकोे टार्गेटतिर पर्न आउँछ ।
2018-12-02 - 202 view(s) - abhiyan